Iipakethi zokutsala - Utien Pack Co,. Ltd.
Yandisa imveliso kwithala ubomi
Ukupakishwa kwe-vacuum kungakucothisa ukukhula kunye nokuzala kwakhona kwee-microorganisms ngokususa irhasi yendalo epakishwe kuyo, ukuze kwandiswe ubomi beshelufu beemveliso. Xa kuthelekiswa neemveliso zokupakisha eziqhelekileyo, iimveliso zokupakisha ezincamathelayo zinciphisa indawo ekuhlala kuyo iimpahla.
Ukupakishwa komshini kulungele zonke iintlobo zokutya, iimveliso zonyango kunye neempahla zabathengi zeshishini.
Ukupakisha i-vacuum kunokugcina umgangatho wokutya kunye nokutsha ixesha elide. Ioksijini ekwiphakheji iyasuswa ukuthintela ukuveliswa kwakhona kwezinto eziphilayo ze-aerobic kwaye icothise inkqubo yegcwala. Kwimpahla yabathengi kunye neemveliso zeshishini, ukupakishwa kwe-vacuum kungadlala indima yothuli, ukufuma, anti-umhlwa.
Ukupakisha i-vacuum kunokusebenzisa umatshini wokupakisha we-thermoforming, umatshini wokupakisha igumbi kunye nomatshini wokupakisha ongaphandle wokupakisha. Njengesixhobo sokupakisha esizenzekelayo, umatshini wokupakisha we-thermoforming udibanisa ukupakisha kwi-Intanethi, ukugcwalisa, ukutywina kunye nokusika, ezifanelekileyo kwiimfuno ezithile zemveliso kunye nemfuno ephezulu yemveliso. Umatshini wokupakisha umgodi kunye nomatshini wokupakisha ongaphandle ulungele amanye amashishini amancinci naphakathi okuvelisa imveliso, kwaye iibhegi zokucoca zisetyenziselwa ukupakisha kunye nokutywina.
Umatshini wokuCoca iiGumbi ezimbini
Umatshini omkhulu wokuCoca igumbi